Iqhawe le-WTN Ukuhola Ezokuvakasha zeBarbados: UJens Thraenhart, isikhulu esisha se-BTMI
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeBarbados Breaking » Iqhawe le-WTN Ukuhola Ezokuvakasha zeBarbados: UJens Thraenhart, isikhulu esisha se-BTMI
Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • Wtn
IBarbados yindawo ekhetheke kakhulu, futhi amaBarbadians ngabantu abakhetheke kakhulu abanezindaba eziningi abangazisho. Umxoxi wezindaba omkhulu umenyezelwe namuhla. UJens Thraenhart, ozophatha iBarbados Tourism Marketing (BTMI) kusukela ngoNovemba 1, ngesikhathi esifanele seWorld Travel Market.
Emasontweni amane edlule, uJens Thraenhart waseCanada / waseJalimane wenziwa iqhawe lezokuvakasha yiWorld Tourism Network.
Iminyaka eminingi, uMnu Thraenhart wayenguMqondisi Wezokuvakasha eMekong futhi kuze kube ngesonto eledlule ezinze eBangkok, eThailand.
Namuhla, uJens Thraenhart waqokwa ukuhola iBarbados Tourism
Manje le ndoda eyaziwa ngokuthi uMnu. Mekong isiyisikhulu Esiphezulu Esiphezulu seBarbados Tourism Marketing Inc. (BTMI).
Ukusuka eBangkok kuye eBarbados, lokhu kuzoba yindawo entsha ezungeze uJens Thraenhart nomndeni wakhe.
UnguJens Thraenhart, umakadebona kwezokuvakasha weminyaka engama-26, "owaqokwa njengomuntu ozoqokwa kakhulu eqenjini lokuqala labangu-178 abaqokelwe umsebenzi ofanelekayo abavela emhlabeni wonke" kusho inhlangano.
Uneminyaka engaphezu kwengama-25 yezokuvakasha kwamazwe omhlaba, ezokuvakasha, nezokungenisa izihambi ezithatha izikhala ekusebenzeni, kwezentengiso, kwezentuthuko kwezamabhizinisi, ekuphathweni kwemali engenayo, ekuhleleni amasu nakwezohwebo. Ekuqaleni komsebenzi wakhe, umkhakha wezamabhizinisi kaJens wacijwa naye ekusunguleni nasekusebenziseni inkampani ephumelelayo yokudla, eqala inkampani ye-Intanethi yokuzilibazisa eseNew York, futhi ephethe indawo yokuzimela egalofu elizimele eJalimane.
Ngo-2014, uJens Thraenhart waqokwa yi-Tourism Ministries yaseThailand, iVietnam, iCambodia, iLaos, iMyanmar, neChina (iYunnan neGuanxi) ukuhola iHhovisi Lokuxhumanisa Ezokuvakasha laseMekong (i-MTCO) njengoMqondisi oMkhulu. Ngo-2008, wasungula inkampani eyadonsa imiklomelo yaseChina iDragon Trail, futhi wahola amaqembu okukhangisa namasu e-Intanethi neCanada Tourism Commission kanye neFairmont Hotels & Resorts. Kusukela ngo-1999, ubelokhu eyi-CEO yeChameleon Strategies.
Efundiswe eCornell University eneMasters of Management egunyazwe nge-MBA, kanye neBachelor of Science ehlanganyelwe evela e-University of Massachusetts, Amherst, kanye ne-University Centre “Cesar Ritz” eBrig, eSwitzerland, uMnu Thraenhart wahlonishwa njengomunye izinkanyezi ezikhuphuka kakhulu embonini yezokuvakasha ngeTravel Agent Magazine ngo-100, zabalwa njengenye ye-HSMAI's 2003 Most Extraordinary Sales and Marketing Minds in Hospitality and Travel ngo-25 nango-2004, futhi yabizwa njengenye yezingqondo ezi-2005 eziPhezulu Ezingavamile ku-European Travel kanye Nokwamukela Izihambi ngo-20. Uyilungu Le-UNWTO Elisebenzisanayo, Ilungu Lebhodi Le-PATA, kanye noSihlalo wangaphambili we-PATA China.
UMnu. Thraenhart unomqondo wembulunga yonke ngempela.
Ukuqokwa kweBarbados kuqala ukusebenza ngoNovemba 1.
UJens akakaze asebenze eCaribbean kodwa uletha ubuholi bomhlaba wonke eBarbados kanye nesifunda saseCaribbean esincike kakhulu kwezokuvakasha.
Juergen Steinmetz, Usihlalo we Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba, wayengomunye wabokuqala abahalalisela uJens ngesikhundla sakhe ethi: “Leli yithuba elihle hhayi likaJens kuphela, kodwa laseBarbados nelaseCaribbean. Sengimazi uJens iminyaka eminingi kangaka. Lokhu bekungeke kube yisinqumo esingcono.”
UJens uyilungu le- Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba futhi emasontweni angu-4 edlule wathola Amaqhawe Ezokuvakasha umklomelo wale nhlangano yomhlaba.
"Lolu wusuku oluhle lweBarbados kanye noMhlaba Wezokuvakasha."
IBarbados Tourism ithe: "Lesi simemezelo sizongenisa inkathi entsha yenhlangano, ezobona ushintsho lwe-BTMI luye ebhizinisini lezentengiso elenza kabusha imisebenzi yalo ukuze liqhudelane kangcono enkathini entsha yobhubhane lwezokuvakasha emhlabeni jikelele."
UJens uyiPhini likaSihlalo wesibili weBhodi Lamalungu Ahlangene leNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba (UNWTO) futhi usebenze emabhodini emboni okuhlanganisa iPacific Asia Travel Association (PATA), iHospitality Sales and Marketing Association (HSMAI), kanye ne-International Federation. ye-IT kanye neTravel & Tourism (IFITT), iletha ubudlelwano babambiqhaza ababalulekile ezimakethe ezibalulekile ezihlosiwe zokuvakasha kwaseBarbados.
USihlalo weBTMI uRoseanne Myers uthe le nhlangano isivele yenze umsebenzi omkhulu wokuvula kabusha izimakethe nokusungula ubudlelwano bezohwebo.
"Sikholelwa ukuthi kuhambisana nolwazi lukaJens lwezokuvakasha lwamazwe ngamazwe, irekhodi elifakazelwe ekusetshenzisweni kwamasu kanye nemibono yezamabhizinisi, i-BTMI izovela kulesi sikhathi sobhubhane inkampani enamandla kakhulu, esebenza kahle kakhulu yokumaketha indawo eletha inzuzo eyengeziwe embonini yethu futhi. umnotho obanzi,” kusho yena.
“Sizibophezele ekutholeni umuntu ongcono kakhulu esikhundleni sokuba yi-CEO ukuze sisize ekulungiseni indlela eya phambili, futhi sijabule kakhulu ngokuthi sikwenzile lokho, ngemuva kwenqubo ephelele nesobala. Siyamamukela uJens eqenjini laseBarbados.”
Abangu-27 baseBarbadians nabangu-178 abavela eCaribbean ebanzi babephakathi kwabafakizicelo abayi-XNUMX. Inqubo yokusesha nokukhetha yenziwe yi-Profiles Caribbean Inc. kanye nekomiti elincane lebhodi nezingcweti zemboni. I-ejensi iphinde yenze ukuxhumana okuqinile kubalingani bemboni yesifunda neyomhlaba wonke be-BTMI.